» यसकारण पुरुषभन्दा धेरै समय सुत्नुपर्छ महिला
यसकारण पुरुषभन्दा धेरै समय सुत्नुपर्छ महिला
१७ माघ २०७५, बिहीबार २०:२१
एक दिनको निद्राले सात दिन पिरोल्छ भन्ने पुरानो भनाई नै छ । निद्राको कमीले धेरै किसिमका समस्या पैदा गर्ने कुरामा अहिले पनि कसैको दुईमत नहोला ।
औसत मानिसले दिनमा कम्तीमा आठ घण्टा मजाले सुत्नु पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । अझ महिलाहरुको हकमा पर्याप्त निद्रा अति आवश्यक हुने उनीहरुको भनाई छ । तर, हाम्रो समाजमा पुरुषभन्दा महिला कम सुत्छन् । महिलाहरु राति अबेरसम्म घरधन्दामा व्यस्त हुन्छन् भने बिहान ४-५ बजे नै उठेर चुलौचौको गर्छन् ।
यसरी उनीहरुको सुताई पर्याप्त हुँदैन । निद्राको कमीले महिलाहरुको शरीरमा दुष्प्रभाव हुनसक्छ । आखिर, महिलाहरुलाई पुरुषको तुलनामा किन बढी निद्राको आवश्यकता पर्छ त ?
– केही विज्ञका अनुसार महिलाहरु मस्तिष्कको प्रयोग धेरै गर्छन्, किनकी उनीहरुलाई एकै समयमा धेरै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्छ । र, दिमागलाई ताजा र चलायमान राख्न पनि उनीहरुलाई पुरुषको तुलनामा धेरै सुत्नु पर्दछ ।
– कामको चापका कारण महिलाहरुले भनेको समयमा सुत्न पाउँदैनन् । ढिलो सुत्दा उनीहरुलाई भट्ट निद्रा पर्दैन । त्यसैले, उनीहरुलाई निद्रा पूरा गर्न पनि अत्यधिक समय सुत्नुपर्छ । विशेषगरी, महिलाहरुको जीवनमा यस्ता बदलावहरु आउने गर्छ, जसले गर्दा उनीहरुको निद्रामा असर पुगेर इन्सोमेनिया हुने खतरा उच्च हुन्छ ।
– मासिक धर्म बन्द भएमा महिलाहरु धेरै बेचैन हुने गर्छन् । जसका कारण उनीहरुलाई समयमा निद्रा पर्दैन । र, निद्राको कमी हुन नदिन पनि उनीहरुलाई पुरुषभन्दा धेरै सुत्नु पर्छ ।
– गर्भावस्थामा शारीरिक र मानसिक बदलावका कारण महिलाहरुलाई सुत्नमा समस्या हुने गर्छ । अझ सुत्केरी अवस्थामा उनीहरुलाई यो समस्या अत्यकि हुन्छ । गर्भावस्थामा अत्यधिक मात्रामा पिसाब लाग्नु तथा खुट्टामा ऐठन हुनाले पनि उनीहरु रातमा राम्ररी सुत्न सक्दैनन् ।
– महिनावारीको समयमा पेटको दुखाईका कारण महिलाहरु आनन्दले सुत्न सक्दैनन् । उक्त समयमा उनीहरुको पेटमा ऐठन हुने, पेट दुख्ने, वाक्वाकी लाग्ने, मुड बदलिने, मन अत्तालिने, घरीघरी भोक लाग्ने गर्छ । जसका कारण उनीहरुलाई राती सुत्नमा कठिनाई हुने गर्छ ।
निद्रा कसरी पूरा गर्ने ?
-सुत्ने टाइम टेबल बनाउने । यसलाई छुट्टकिो समयमा समेत पालना गर्ने ।
-सुत्नु अगाडी तातोपानीले नुहाउने र तातो दूध पिउने । यसले पनि गहिरो निद्रामा मद्दत गर्छ ।
-सुत्ने कोठा धेरै उज्यालो नहोस् भन्नेमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
-उच्च गुणस्तरको तकिया र ओछ्यानको प्रयोग गर्ने ।
-सुत्नुअघि कफी नपिउने ।
साभार :अनलाईन खबर
६ महिनादेखि सिकलसेल एनिमिया रोग परिक्षणगर्ने एचबि ईलोक्ट्रोफोरेसिस मेशिन नबन्दा बिरामीहरु मर्कामा
मनोयौन विकार (Psycho sexual disorder) के हो ?
औषधि प्रयोग नगरी डिप्रेसनको उपचार
आज पाँचौं अन्तराष्ट्रिय योग दिवस
मौलिक लोकगीत सङ्गीतको पर्यायवाची लोक स्टारमा उदाउँदै रामकुमार नेपाली
बाँकेका सूचना अधिकारीहरुले ३/३ महिनामा सूचना स्वतः प्रकाशन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता
मितेरी समाज, युएईको तीज धमाका
आमा स्मृति मञ्चद्वारा आमा महिमाको चर्चा
नेकपा निकट कुशवाहा समुदायको बृहद भेला
रवि लामिछानेसहित तीनजनालाई मध्यरातमा चितवन पुर्याईयो
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुधार गर्न सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीच छलफल
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, युएईमा महेश मोक्तान
गोडा फ्याँ पार्नेलाई अनौठो कुर्सी
ट्रकको ठक्करबाट पुल भाँसियो, अवरुद्ध राजमार्ग ड्राईभरसनमार्फ सुचारु
परिचर्चा मिडिया प्रा.लि.
सूचना बिभाग दर्ता नं: ८१९/०७४/०७५
सम्पादक: प्रमेश बादे
© 2018 paricharchanews.com. All rights reserved.
Powered By | Busymind International Pvt. Ltd.